C/raxman C/shakuur Warsame oo la Ogaaday in uu soo Xaday maqaal uu ku soo qoray Bartisa Facbook | allsaaxo online
C/raxman C/shakuur Warsame oo la Ogaaday in uu soo Xaday maqaal uu ku soo qoray Bartisa Facbook
Waxaan waqti kubixiyay in aan akhriyo “Maqaalka” C/raxman C/shakuur Warsame, waxaana iiga soo baxay qodabadan:
1) Qaybta kusaabsan Ethiopia:
 Wuxuu soo turjumay maqaal uu qoray nin Faransiis ah oo layiraahdo Rene Lefort, wuxuuna ugu magacdaray maqaalkiisa “Ethiopia: Climbing Mount Uncertainty”. fiiri liinkigan www.opendemocracy.net/ren-lefort/ethiopia-climbing-mount-uncertainty waxaadna isbar bar dhigtaan qormada C/raxman C/shakuur & mida Rene Lefort, sidoo kale waxaad isu fiirisaan taariikhda labada qormo.
 Hadaba, in maqaal qof kale qoray laturjumaa wax dhib ah maleh, waa hadii fasax laga haysto qofkii maqaalka qoray asal ahaan, laakiin waxaan meesha kujirin, in adoo sheeganaya aqoon Diineed & mid Maadi intaba, aad qormo nin kale qoray u’ekeysiisid in aad adigu qortay, dadka noocaas udhaqmana waxay muxadisiintu uyaqaanaan “سرقة الحديث” oo micneheedu yahay “Tuugtii xadiiska”, duuganimadu ma’ahan oo kaliya in laxado lacag ama alaab, ee sidoo kale in Fikir ama aqoon lawariyo iyadoon lasheegaynin asalkii, waxay noqotaa Tuuganimo.
 Intaa kadib, wuxuu bilowga qoraalkiisa kusheegay:
In Somalida, Shacab & Siyaasiyiin aysan aqoon ulahayn Ethiopia!
In isaga kaligiis aqoon uleeyahay Ethiopia! (Kaligii yaqaan/wax walbo yaqaan)!
In Ethiopia tahay “dal wayn oo itaal & dhaqaale inaga badan”, taasoo ah buun-buunin ama/iyo xayaysiin uu usamaynayo Ethiopia, kuna niyad jabinayo shacabka Soomaaliyeed ee wax ka’akhrista page-kiisa.
In uu ka’afgobaadsaday mabda’iisa kusaabsan Ethiopia in ay tahay cadaw ama saxiib Somaliyeed.
2) Qaybta kusaabsan Eritrea:
Waxaa kamuuqatay in uusan xogfiican kahaynin Eritrea, maqaalna uusan ka’akhrinin, mid uusoo xaday & mid muuqda intaba, balse uu wax kudhisay “waa layiri & cilmi dhagood” waana wixii uu kucambeereeyay walaalihiis Soomaaliyeed! (رمتني بدائها وانسلت!).
3) Qaybta Kusaabsan isbahaysiga sadexgeezoodka ahna, wuxuu soo xigtay maqaal ay daabacday Daily Nation oo uu qoray Peter Kagwanja, laakiin tan wuu sheegay xigashada inkastoo uu micna/afkaar qaldan uu saaray!
4) Qaybta kusaabsan Soomaaliyana jawaabteeda idinka ayaan idiin dayni.
Maqaalka 95% wuxuu ahaa tarjumaad uu kasameeyay maqaalada Rene Lefort & Peter Kagwanja.
85% wuxuu kusaabsanaa Ethiopia.
Maqeexin waxa ay latahay mustaqbalka Ethiopia waxa uu noqon doono.
Waxaa kamuuqday qaladaad badan oo kusaabsan Ethiopia & in uusan aqoon ulahayn wax kabaxsan maqaalka uu akhriyay.
Maqaalkan boolida ahi masheegin waxa lagudboon umada Soomaaliyeed ee uu afkeeda wax kuqorayay!
Wuxuu aaminay in aan la’ogaan doonin xatooyada qoraalka ee uu sameeyay, mindhaa wuxuu isyiri Somalidu wax ma’akhriso.
Wuxuu meel ugadhacay umada somaliyeed!
W/Qoray: Ibraahim Cali Aadan